Isikere sezilwanyana Abavelisi kunye nabaXhasi | Umzi mveliso wase China Pet Scissors
Isikere sokucoca izilwanyana zasekhaya
Esi sikere sokucheba isilwanyana senziwe ngezinto zentsimbi ezikumgangatho ophezulu, ezinesilinganiselo sokucheba esingama-70-80%, kwaye asizukutsala okanye sibambe iinwele xa sisika.
Umphezulu wenziwe nge-vacuum-plated titanium alloy technology, eqaqambileyo, entle, ebukhali nehlala ixesha elide.
Esi sikere sokucoca isilwanyana siya kuba yeyona nto incedisayo ekusikeni uboya obungqindilili kunye neetangile ezinzima, okwenza ukusikwa kube kuhle ngakumbi.
Isikere sokucoca izilwanyana zilungele izibhedlele zezilwanyana zasekhaya, iisalon zezilwanyana zasekhaya, kunye nezinja, iikati kunye nezinye iintsapho. Unokuba sisixhobo sokuhombisa izilwanyana kunye nokuzilungisa ekhaya ukonga ixesha kunye nemali
Isikere sokusika iinwele zasekhaya
Amazinyo angama-23 kwincakuba yekama enesitayile yenza le nto ibe sisikere esineenjongo zonke.
Isikere sokucheba iinwele sasekhaya ikakhulu ukunciphisa.it inokusetyenziselwa ukunciphisa okulula, kulungele zonke iintlobo zoboya. Ukukhanya kunye nebala eligudileyo lenza ukusika izinja ezinqabileyo zikhuseleke kwaye kube lula, kwaye nabani na angazisebenzisa ukusika iinwele.
Ngesi sikere esibukhali nesisebenzayo sokusika isikere, uya kufumanisa ukuba isilwanyana sakho asilulanga kwaphela.
Isikere sokuzilungisa izinja
Iseti yeSikere sokuzilungisa
Iseti yesikere sokuzilungisa ibandakanya isikere esithe nkqo, isikere sezinyo, isikere esigosogoso kunye nekama ngqo. Iza nengxowa yesikere, yonke into oyifunayo ilapha.
Iseti yesikere sokuzilungisa senziwe ngentsimbi ephezulu engenasici. Isikere bubukhali obuphezulu, bomelele kwaye ikama lomelele ekusebenziseni ixesha elide.
Irabha kwisikere ayinakuphela ukunciphisa ingxolo ukuqinisekisa ukuba isilwanyana asizukoyika, kodwa sikuphephe ukwenzakala kokugaya ngesandla.
Iseti yesikere sokulungisa izilwanyana zigcinwa engxoweni, yenza ukuba kube lula ukuphatha kwaye kugcinwe. Le sethi ifanelana nazo zonke iimfuno kunye neemfuno zesilwanyana sasekhaya.
Isikere sokulungisa inja egobile
Isikere sokulungisa inja egobile sikulungele ukusika intloko, indlebe, amehlo, imilenze enoboya kunye neempuphu.
Umphetho wesitshixo obukhali ubonelela abasebenzisi ngamava okusika agudileyo kunye noxolo, xa usebenzisa esi sikisi sokunyanga inja awuyi kutsala okanye ukutsala iinwele zasekhaya.
Uyilo lobume bobunjineli likuvumela ukuba ubabambe kamnandi kwaye unciphise uxinzelelo egxalabeni lakho. Isikere sokulungisa inja egobileyo siza ngomnwe kunye nokufaka isithupha ukuze ulingane izandla zakho ukuze ubambe kamnandi ngelixa usika.